Afghanistan: Hetsi-panoherana tao Kabul manohitra ny governemanta Iraniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Janoary 2011 17:16 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, македонски, Italiano, Português, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Nanao fihetsiketsehana teo ivelan'ny masoivoho Iraniana tao Kabul ireo Afgana mpanohitra tamin'ny Alakamisy, Afghanistan manohitra ny antsojay mahazo ny Afgana mpifindra monina sy mpialokaloka any Iran, ary koa manohitra ny ankivy ara-tsolika ataon'i Iran mahazo an'i Afghanistan amin'izao fotoana izao. Ny fihetsiketsehana androany dia nokarakarain’ ny Afghanistan Solidarity Party. Lazain'ny governemanta Iraniana fa ny tanjon'ilay ankivy dia hisakànana ny fahazoan'ny tafiky ny OTAN solika.
Doro sarin'ireo mpitarika Iraniana
Ity video ity dia mampiseho ireo mpanao fihetsiketsehana mandoro ny sarin'ny Mpitarika Faratampon'ny Repoblika Islamika, Ali Khamenei sy ny Filoha Mahmoud Ahmadinejad. Mikiakiaka ny olona hoe, “Aongàny Ahmadinejad sy Khamenei.”
Gadra Iraniana, Afghana maty
Ny Radio Koocheh dia namoaka sary marobe avy amin'ny fihetsiketsehana androany (13 Janoary 2011). Ireo Afgana mpanohitra dia nitondra sarin'ireo Afgana maro maty sy ireo mafàna fo ara-politika Iraniana notanana am-ponja (etsy ambony).
Radio Koocheh dia manoratra fa nisy ampolony mahery ireo mpanohitra no nitora-bato ny masoivoho Iraniana tao Kabul.
Porteghal Froosh (midika hoe ‘Mpivaro-Boasary laoranjy’) manoratra [fa] fa tamin'ny Zoma lasa, ny 07 Janoary, dia nisy hetsi-panoherana iray hafa manohitra ny fanapaha-kevitry ny Repoblika Islamika hanakana ireo fiarabe 200 mpitondra solika tsy hiditra any Afghanistan. Ilay mpitoraka bilaogy dia manoratra fa ilay fanakànana dia niteraka sondro-bidy tamin'ny solika… Ny governemanta Afgana dia niampanga ny politika Iraniana ho manitsakitsaka ny lalàna iraisam-pirenena.
Eghtesad Afghnestan (midika hoe ‘Toekaren'i Afghanistan’) dia manoratra [fa] fa i Afghanistan dia manafatra ny solika rehetra ilainy ka 30% no avy any Iran.
5 ora izayZeorzia